काठमाडाै । २३ औँ जनयुद्ध दिवस माअाेवादी केन्द्रले पेरिस डाडाँमा एक कार्यक्रम गरी मनाएकाे छ । नेकपा माअाेवादी काे भातृ संगठन वाइसिइलले अायाेजना गरेकाे उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले केक काट्दै दिवस मनाएका हुन ।
चार टुक्रामा विभाजित माओवादीले आज फरक फरक स्थानमा जनयुद्ध दिवसको स्मरण गर्दैछन्। नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले बृहत् अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ जहाँ पार्टीका शीर्ष नेता सहभागी हुने कार्यक्रम छ। याे संगै २३ औँ जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यष दाहालले पार्टी एकता गरेर कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एक बनाउने अवसरलाई गुम्न दिन नहुने बताएका छन । उनले एमाले र माओवादी एकतासँगै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र मोहन बैद्य किरणलाई पनि एकता प्रक्रियामा सहभागि हुन आव्हान गरे ‘ यो महान एकता र बहसमा सक्रियतापुर्वक सहभागिता जनाउन म समान विचार भएका कम्युनिष्टहरु सवैलाई आवहन गर्छु ।’
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन ०१, २०७४१४:२१
सामाजिक संजालमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री अधिकारीको निधनको हल्ला ! अस्पताल यसो भन्छ !
२४ वर्ष जेठो सुल्तानसँग विवाह गर्दै यि सुन्दरीले तय गरिन् ब्युटी क्विनदेखि महारानीसम्मको यात्रा!